Akara Day Flag iji sọpụrụ Flag ahụ - pisklak.net
Akara Day Flag iji sọpụrụ Flag ahụ
Taa bụ ụbọchị ọkọlọtọ na gburugburu niile anyị na-ahụkarị uhie, ọcha, na acha anụnụ anụnụ. Ọtụtụ ndị America na-eme ezumike a websiten’igosi ọkọlọtọn’ihu ụlọ na azụmaahịa. Anyị nọ na cha cha cha cha cha cha ga-asọpụrụ ụbọchị ọkọlọtọ website t iji akara ngosi ụbọchị pụrụ iche iji bulie mmetụta ịhụ mba gịn’anya.
Flag Day Nkwado
Ọ dịghị ụzọ dị mma iji mee ememme taa karịa igwu egwuregwu d e cha cha cha cha cha cha cha mma na USA. Anyị ga-enyere gị aka na nke ahụ na ezigbo self love ị nwere ike ịgbapụtan’ime ụbọchị abụọ na-esote.
The bonus bụ karịa mma n’ihi na ọ bụ a dịghị mmachi bonus. Ga-enweta ego 100 percent NO MAX CASH ma ọ bụrụ na ịgbapụta koodu FLAGDAY. Ma, nke ahụ abụghị ihe niile! Lezienụ anya, ọ bụrụ na ịgbapụta koodu a, ị ga-enwerịrị ike ịnweta koodu FLAGDAY100 nke ga-akwụ gị ụgwọ maka 100 FREE SPINS maka igwu egwu Money Bandits 3.
Ugbu a, have been nkeji ole na ole gụọ usoro nke nkwado a little malite igwu egwu.
Opekempe nkwụnye self explanatory: $35 Wagering: 35x Max self love: Ọ dịghị onye nwere ike itinye t: Oghere ndị na-enweghị ọganihu Naanị Max nzọ kwa aka: $10
Dị: Ndị niile jiri FLAGDAY Wagering: 45x Max self: $100 na-akwụ ụgwọ t: Oghere ndị na-enweghị ọganihu Naanị Max nzọ kwa aka: $10